Waalidiinta Gariiga oo caruurtoodii ka caraya, maxaa u sabab ah ? (Warbixin yaab leh) – SBC
Waalidiinta Gariiga oo caruurtoodii ka caraya, maxaa u sabab ah ? (Warbixin yaab leh)
Posted by editor on January 18, 2012 Comments
Dhibaatada dhaqaale ee dharbaaxdey wadamo badan oo ka mid ah aduunka gaar ahaan qaarada Yurub ayaa ku riixdey dadku inay sameeyaan talaabooyin kala duwan oo sheeko iyo shaahid aan lagu maqal kuwaasi oo xaaladaha sii xumaanaya ay ku xambaareen.
Warbaahinta aduunka waxaa si isdaba joog ah u soo gaaraya dhacdooyhin kala duwan oo la xiriira dhibaatooyinkaasi dhaqaale raadka ay reebeen, waxaana jira dad badan oo naftoodii haligay oo inay isdileen ka doorbiday nolasha qalafsan ee ay ku sugan yihiin, inkastoo taasi tahay iimaan la’aan, diin la’aan iyo dulqaad la’aan.
Dalka Gariigu wuxuu ka mid yahay wadamada Yurub ee ay sida xoogan uga dhaceen dhibaatooyinka dhaqaale ee ruxaya qaarada Yurub, waxaa dhacay dibadbaxyo balaaran oo ay dhigeen ururada shaqaalaha iyo dadweynaha caadiga kuwaasi oo ka cabanaya sicir bararka iyo dhaqaalaha dhulka ku sidbaday ee dalkaasi, taasi oo keentey in xitaa xukuumadii wadankaasi ay ka duusho masraxa siyaasada.
Hadaba dhibaatooyinkaasi kor ku xigan ayaa dadka caadiga ah Gariiga taabtey, waxaase haatan soo baxaya tii ugu darneyd oo ah in waalidiin badan ay ilmihii ay dhaleen ay dariiqyada ugu tageen kana carareen iyagoo ku andacoonaya in ay aanay hayn wax ay ku quudiyaan.
Waalidiinta arinkan ku dhaqaaqay ayaa waxaa ugu badan kuwa ay haysato xaaladaha nolol xumo iyagoo sheegay inaanay xanaaneyn karin awladii ay dhaleen.
Gariiga oo ka mid ahaa wadamadii aduunka xaga dawladnimada ugu horeeyey isla markaana tiir dhaqaale oo xoog badan ku taagnaa hada sheekadaasi waa la iskala tagey, waxaana ay maraysaa Nin walbow naftaa, oo waxaaba xitaa la xaqiijiyey in wadankaasi ay ku yaraatey daawada gaar ahaan kaniiniga xanuun jabiyaha ah ee Aspirin-ka.
Natasha oo ah gabar oo afar sano jir, iyadoo ilmadu ka qubanayso wehel iyo waalidna aan haysan ayaa lagu arkay dariiqa mid ka mid ah magaalooyinka waa weyn ee dalka Gariiga, nin macalin ah ayaa gabadhaasi yar dariiqa kula kulmay iyadoo oohintu ka dhamaatey, waxayna gacanta ku haysay waraaq ay ku qornaayeen ereyo yaab iyo fajac ka abuuray qof kasta oo sheeko iyo shaahid ku maqley arintaasi.
Wiil yar oo boonge ku baashaalaya si shilaamad loogu daadiyo
Waraaqda waxaa ku qornaa hadalkan “ Dib ugu soo laaban doono maanta Anna, maxaa yeelay awood uma lihi inaan xanaaneeyo, fadlan qaado gabdhan oo si wanaagsan u xanaanee, waana ka xumahay”, ninkii qoraalkaasi helay wuxuu sheegay in uu gariiray oo uu yaab iyo amakaag ku dhamaaday.
Hooyo kale oo magaceeda ku soo koobtey Maria, waxay sheegtey in dantu ku qasabtey in gabar yar oo ay dhashay oo sanad jir ah ay dayacdo oo ay saacado badan guriga kaligeed uga tagto, iyadoo shaqo raadinaysa oo baadi goob ugu jirta.
Maria waxay sheegtey in waxa kaliya ee gabadheeda ay ku quudiso inay yihiin cunto hal mar hel ah oo ay fayl ugu gasho Kaniisadaha magaalada ay ku nooshahay.
“Habeen kasta kaligey ayaa guriga dhexdiisa ku ilmeeya, laakiin ma aqaan wax aan sameeyo,” ayay tiri Maria oo markii dambe shaqo ka heshay Maqaaxi ayna ka qaadato maalintii 20 doolar balse ay ku tilmaamtay in aanay isku hayn karin shaqada iyo xanaanada gabadheeda ayna geystey xarun ilmaha lagu xanaaneeyo.
Antonios Papanikolaou oo ah aasaasaha mid ka mid ah xarumaha ilmaha lagu xanaaneeyo ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay oo kaliya ay xaruntiisa yimaadeen boqolaal waalid ah oo doonaya in ilmahooda uga tagaan xarunta, kuwaasi oo xarunta aqoon u leh isla markaana aaminsan.
“Waxay inoo sheegeen inaanay u hayn wax dhaqaale ah, ama xitaa daryeel kale oo ay ka mid ay ka mid tahay guri, isla markaana ay inaga naga rajeynayaan inaan siino waxay ay ilmuhu u baahan yihiin” ayuu yiri Antonios.
Wiil Kitaarad yar ka shanqarinaya kiish yarna uu hor yaal
Sidoo kale hay’adda SOS ee xanaanada caruurta waxay sheegtey inay hoy u sameysay oo ay quudiso caruur fara badan oo aan haysan wax waalidiin ah oo daryeesha.
Magaalooyinka waa weyn ee dalkaasi Gariiga gaar ahaan magaalada caasimada ee Athens dariiq kasta waxaa kasta waxaa ka muuqanay caruur yar yar oo u badan wiilal oo tuugsanaya, qaarkood waxay u tuugsi ku lamaaniyaan xariifnimo iyagoo kitaaro ama boonge garaaca ka dibna kolay yar oo ay ugu tala galeen in shilimaadka loogu rido agtooda soo dhigta.
waxaa sababay macaluusha kataagan qaarada aasiya
Sayid c/laah says:
Waa wax naxdileh balse gaajada aduunka ugudarani waxay ka jirta afrika walina lama arag ilama laga tagay oo waraq loodhibay hadana afrika ayaa ka ilma badan iyagu 2ilmood kama badna sababtu waxay tahay gaajada ayaa ku cusub iyaga mana garanayaan dulqaata waad ka bixidontane.